Olan’ny rano ao Toamasina: nampiaka-peo ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa | NewsMada
Olan’ny rano ao Toamasina: nampiaka-peo ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa
Par Taratra sur 27/07/2017
Efa ela ny fimenomenonan’ny vahoaka manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana sy fahatapahan-jiro lavareny eto Toamasina.
Nifoha tamin’ny fanginana amin’ izay ny filohan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa sampana Toamasina (RPDC), izay manana ny foibeny any an-dRenivohitra. Nitafa tamin’ny mpanao gazety ny herinandro lasa teo ny mpitarika ny fiarovan’ny zon’ny mpanjifa sy zon’ olombelona anivon’ny faritra atsinanana, Andriamihaja Jean René. Navoitrany fa efa mihoatra ny tokony ho izy ny fitarainan’ny mponin’ i Toamasina manoloana ny zava-misy eo amin’ny orinasa Jirama, ny fahasarotan’ny fahazoana kaontera, ny fahatapahan-jiro lavareny, fahataran’ny fampidirana jiro sy rano ary ny fahalotoan’ izany indraindray.
Tokony ho afaka mividy kaontera ny mpanjifa
Nisy, noho izany, ny fihaonan’ny filohan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa tamin’ny talem-paritry Jirama ary nahafahana nanolotra sosokevitra entina hamahana ny olana. “Tokony omena fahefana misimisy ireo sampan’ny Jirama aty amin’ny faritra. Tsy tokony mila mandefa fangatahana any amin’ny tale jeneralin’ny Jirama aty Antananarivo, fa afaka mividy kojakoja na filana madinidinika an’ny Jirama aty amin’ny faritra. Tokony avela mividy kaonteran-jiro sy rano amin’ny sehatra tsy miankina koa ireo tokantrano hampiditra izany ka ny Jirama avy eo no mametaka izany sy mifanaraka amin’ny mpanjifa. Samy mahazo tombontsoa amin’io na ny Jirama na isika mpanjifa”, hoy i Andriamihaja Jean René.
Tokony hifanampy hanolo ny fantsona antitra
Natsipiny kosa fa tokony hifanaraka amin’ny vidin’ny famokarana herinaratra ny vidin-jiro atolotry ny Jirama. Notsiahiviny fa angovo karazany roa no mamatsy an’i Toamasina : angovo azo avy amin’ny solika (thermique) sy angovo azo avy amin’ny rian-drano (hydraulique). Tsy mitovy mihitsy ny vola lanin’ny Jirama amin’ireo famokarana karazan’angovo roa ireo ka tokony hipaka any amin’ny vahoaka ny elanelam-bidy.
Tsy izay ihany, nasiany resaka koa momba ny fahalotoan’ny rano tonga isan-tokantranon’ny mpanjifa indraindray eto Toamasina Renivohitra, izay mateti-pitranga. Niantso ireo tompon’andraikitra manana adidy amin’ny fanomezana rano madio fisotro ny vahoaka toy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, minisiteran’ny Rano ary ny minisiteran’ny Tontolo iainana ny tenany, hiaraka hisalahy hanolo ireo fantsona lazaina fa antitra milevina any ambanin’ny tany mitondra ny rano.